U fiirso si dagan | Taariikho taxano ah
« Baro dadka tarikhda kugu jira
Taariikh koban muse suudi »
U fiirso si dagan
Aniga shaqsi ahaan murugada muuqaalka sawirkani i baday iyo sida uu xaqiiqa jirta ugu taagan yahay markaan dhuuxay waxay iga keentay intan:
Qab qab dhaafay soomaaliyey qaran ma noo diidey?
Qaashkiyo bilaawaha miyaa la isku qaaxeeyey?
Qaarqaadka dhaawaca miyaa qawyo laga daadshey?
Sawirkaa waxan jecelahay in aan intaa ku dhaafo oo maanta cidna loo fasiri maayo, wuxuuna tusaale cad u yahay dabin laynoo dhigay oo aynu si hawl yar qoobka ugu ridaney. Qof kasta oo Saamaaliyeedna waxan odhan lahaa si fiican ugu fiirso, waraabayaasha hoos jooga oo maydka iyo dhaawaca sugayana kan ugu weyni waa jaarkeena oo markii horena waranka iyo tooreyda isugu keen dhiibey.
(Sawirka II), kani labaad wuxu ka koobanyahay 9 qaybood oo isku xidhan oo ka tarjumaya siyaasad ugu yaraan 200 oo sano ka hor dhidibada loo aasay oo taliskii Xabashidu qarniyo hore dejitsey marnana aanay ka tanaasulin, ahna majaraha u xariiqan oo nin kasta oo madax ka noqdaa raaco fulintiisuna waajib ku tahay, bal isna ila arka:
(1) Tan ugu horaysaa waxay ina tusayaa taariikhdaas halkii boqortooyada Abasiiniya ay geeska Afrika kaga tiil iyo intii dhul u ahayd.
(2) Waxay ina tusaysaa muddo sodon sano ka yar halkii ay gaadhey iyadoo adeegsanaysa hubkii ay gumaystayaashu reer Yurub ku caawiyeen gaar ahaan (Ingriis, Faransiis iyo Ruush), Waxaadna arkaysaan sida 30 sano mudo ka yar dhulkeedii u afar laabmay.
(3) Iyadoo ujeedadeeda weyni tahay in ay xalaalaysato oo looga hadho wixii ay dhul maroojisey waqtigii xukunkii Minilik, waxay Qaramada Midoobey waydiisatey in wadamadii talyaanigu xukumayey lagu wareejiyo (Somalia iyo Eriteria ), halkaana mashruucii inta ka hadhsan ka dhamaystiro oo badda CAS iyo Badweynta HINDIYA halkaa gacanta kala gaadho.
(4) Eriteria way ku guulaysatey badda casna jid bay u heshay dhulkii ay hore u boobtayna waa u xasiley. Waxana arrintaas si gaara gacan ugu siisay dawladda Maraykanka oo ku hawlanayd markaas dagaalkii Kuuriya oo isagana loo balan qaaday in qaacidad laga siin doono Badda Cas ee Eriteria marka ay xukunka amxaarada hoos timaado.
(5) Intii u dhexaysey 1960-77, waxa gacanta gumaysiga ka xoroobey saddex qaybood oo ka mid ah qaybihii isticmaarkii reer Yurub iyo Amxaaro u qaybiyeen dalka Soomaalida.
(6) Xaile Salaase wuxuu sheegtay markii u horaysey in xeebta Soomaaliyeed ee faransiisku gumaysto ay tahay gobol ka lumay. Wuxuuna soo jeediyey in ama gumaysiga Fransiisku sii joogo ama isaga lagu soo wareejiyo.
(7) Waa sida Abasiiniya noqon la hayd haddii ay u hirgeli lahayd sheegashada Xayle Salaase. Isla waagaa, Xabashidu waxay balan qaaday in goor ay noqotoba ay Jabuuti gacanteeda soo geli doonto. Laakiin shacabka reer Jabuuti way ka tashadeen in aanay qawlalada waraabaha ku dhicin, ilaahna waa ku guuleyey.
(8) Xabashidu iyada oo aad moodo in ay si fiican u dhuuxday murtida Soomaaliyeed oo leh: Gudiney gobolkay baa kugu jiree ima goyseen, bay waxay heshiis la gaadhey Jabhadii la odhanjirey SNM. Warkaasi wuxu ku soo baxay wargeysyo kala duwan uu tusaale u yahay (Cosmopolite n.6, Abril 1986).
Heshiis kaasi wuxu dhigayey in: (I) Amxaarku taageero buuxda siiyo sidii ay u samayn la haayeen “Northern State” oo ka gooniya Jamhuuriyadda Soomaaliya kana go’da oo ka kooban waqooyi galbeed. (II) In amxaaro markaa ka dib ay xoogaa ka mid ah hawdka uu ugu soo daridoonto. (III) Taasina ay ku xidhantahay in dawlad ku sheegaa cusubi uu dhexdhexaad ka noqdo waxa dhex mari doona xabashi iyo Jamhuuriyadii Soomaaliya waxa ka hadha oo ay ku duuli doonto.
(9) Jidka Xabashi u jeexani wuxuu ahaa in marka hore iyada oo waqooyiga la adeegsanayo Soomaali laba loo kala gooyo. Marka xigta in koonfur lagu duulo oo la qabsado. Intaasi markay isku dubadhacdo in waqooyi la yiraahdo adna qaranka cusub ku soo biir. Run ahaantiina qofka Soomaaliyeed oo Xabashi daboor u noqdaa mashruucaas uun buu wax ka fulinayaa.
Aniga oo laga yaabo in aanan ereyada sidoodi u qoran ee macnaha soo qaatay, intaa waxaa ku eg, aragtidii qotada dheerayd oo Dr. Cumar soo raaciyey khariidada aynu ku magacownay (Sawirka II).
This entry was posted on March 22, 2009 at 9:32 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.